. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: April 2009
ရေးသားသူ moekhar at 4/28/2009 10:58:00 PM 14 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 4/27/2009 03:58:00 PM 17 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 4/23/2009 12:09:00 PM 24 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 4/22/2009 05:53:00 PM 22 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 4/21/2009 05:38:00 PM 13 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 4/20/2009 11:19:00 PM 10 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 4/20/2009 01:21:00 PM9comments:
ဒီနေ့ မနက် သူငယ်ချင်းတယောက်ပေးသွားတဲ့ သီချင်းတွေနားထောင်ရင်း သီချင်းတပုဒ်ကို အရမ်းကြိုက်မိတယ် .. အဲဒါနဲ့ စာသားရှာ ဆိုသူရဲ့ အကြောင်းတွေ ရှာနဲ့ တော်တော်အလုပ်များသွားတယ် .. သီချင်းလေး နားထောင်ကြည့်ပါဦး .. အကြိုက်ချင်းတူတဲ့သူတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ် .. Shayne Ward ရဲ့ Breathless သီချင်းလေးပါ .. နားထောင်ပြီးရင်လည်း ပြန်ပြီး နားထောင်တာပေါ့ ..း)
Mp3 လိုချင်သူများအတွက် ဒီမှာ ပါ
ရေးသားသူ moekhar at 4/19/2009 01:56:00 PM4comments:
အကြောင်းအရာခွဲ သီချင်း, နှစ်သက်မိရာများ
ရေးသားသူ moekhar at 4/17/2009 05:17:00 PM9comments:
တန်ခူးလေကို ရှုရှိုက်ရင်း သင်္ကြန်ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို ထိတွေ့ မခံစားလိုက်ရပေမယ့် လက်ပြနှုတ်ဆက်နေသလို ခံစားရတယ် .. သင်္ကြန်ချိန်ကတော့ လာချိန်တန်လို့ လာခဲ့ပြီး ပြန်ချိန်တန်တော့လည်း ပြန်သွားခဲ့ပြီ ..
ပိတောက်တွေလည်း ဝေပြီးလို့ ကြွေကြပြီ ..
ပြီးခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီး ရှေ့ဆက်မယ့်အနာဂတ်ကို ကြိုဆိုလက်ခံလိုက်မယ် ..
မြန်မာခုနှစ် သက္ကရာဇ်တခုကို နောက်ချန်ပြီး နှစ်သစ်ကို ခြေဦးလှည့်ခဲ့ပြီ .. နှစ်သစ်မှာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ချစ်သူ ခင်သူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီး လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် .. ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်လေးမှာ ဆန္ဒတွေလည်း ကိုယ်စီ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ .. ခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ ကောင်းမှုတွေထက် ပိုမို မွန်မြတ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်း ပြုခွင့်တွေ့ကြုံကြပါစေ ..
ရန်ကုန်မှာကလည်း သတင်းတွေကြားနေသေးတယ် .. မုန်တိုင်းဝင်ဦးမယ်တဲ့ .. မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံးလည်း ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ ဒီကပဲဆုတောင်းနေလိုက်ပါတယ် ..
ရေးသားသူ moekhar at 4/17/2009 03:35:00 PM 1 comment:
ရေးသားသူ moekhar at 4/16/2009 08:36:00 AM 8 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 4/14/2009 05:25:00 PM9comments:
ဒီသီချင်းက ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက နားထောင်ဘူးပြီး ကြိုက်ခဲ့တဲ့သီချင်းပါ .. Mariah Carey ရဲ့ One sweet day ပါ .. ခု သတိရလို့ ပြန်ရှာကြည့်ပြီး အကြိုက်တူသူတွေ နားထောင်နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ .. ဒီမှာ က mp3 ပါ ..
ရေးသားသူ moekhar at 4/10/2009 03:26:00 PM7comments:
ရေးသားသူ moekhar at 4/03/2009 02:50:00 PM 21 comments:
စာရေးစရာစဉ်းစားမရလို့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေပဲ နားငြီးအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. အထူးသဖြင့် မောင်မျိုး :P
အာဇာနည်နဲ့ မီးမီးခဲရဲ့ ပုံရိပ်ဟောင်း ခွေထဲကပါ -
တိတ်တဆိတ် - မီးမီးခဲ
ပုံရိပ်ဟောင်း - မီးမီးခဲ
မျှော်လင့်သော မနက်ဖြန် - အာဇာနည်
ရွှေရောင်အရှုံး - အာဇာနည် မီးမီးခဲ
မိန်းကလေးအချစ် - မီးမီးခဲ
သူငယ်ချင်းတယောက်က ပုံရိပ်ဟောင်းသီချင်းညည်းသံကြားတာနဲ့ လိုက်ရှာပြီး ဒေါင်းထားတာပါ အကြိုက်ချင်းတူရင် နားထောင်နိုင်အောင်လို့
ရေးသားသူ moekhar at 4/02/2009 12:49:00 PM5comments: